Daafac Caan Ah Oo Bale Kala Wareegay Rikoorka Xidiga Ugu Dhaqsiyaha Badan Kubada Cagta [Muuqaal] %
Daafaca dambeedka buuxa ee kooxda kuabda cagta Lobos BUAP, ayaa wuxuu sameeyay rikoor wayn kadib markii uu ku orday xawaaro dhan 36.15 km/h intii lagu guda jiray kulankii ay wajaheen dhigooda Chivas ee ka tirsanaa Liga MX.
Laacibkaan ayaa wuxuu Iskoorkaas kala wareegay ciyaaryahanka Real Madrid, wiilka lagu magacaabo Gareth Bale, kaasoo lagu tilmaamo inuu kamid yahay ciyaartoyda ugu dhaqsiyaha badan marka laga hadlo xawaaraha kubada cagta.
Luis Advíncula, oo ah 28-sano jir ayaa wuxuu udheelaa naadiga Lobos BUAP, taasoo kamid ah kooxaha ka dheela horyaalka heerka koowaad ee Mexico, isagoona Iskoorkaan sameeyay kaliya kulan uu dheelay, Isbuucii 11aad ee Liga MX ee xagaagan.
Daafacaan oo udhashay wadanka Peru ee Laatin Ameerika ayaa wax ka yar inta uu laacibka Los Blancos ee Gareth Bale ku sameeyay oo ah 35.7 km/h ku tegay Goolka kooxda kale, islamarkaana uu kan kooxdiisa uu dib ugu soo laabtay.
Bale ayaa waxaa hadda uu yahay mid jooga wadanka Shiinaha, isagoona metalaya wadanka Wales, uuna ka qeyb qaadanayo kulamada saaxibtinimo ee uu dheelayo.
Hadaba, waxaad halkaan hoose aad ka daawan kartaa Muuqaalka uu ciyaaryahanka kooxda kubada cagta Lobos BUAP wiilka lagu magacaabo Luis Advíncula, uu ku jabiyay rikoorka uu Gareth Bale horey ugu sameeyay kubada cagta ee daawaho wanaagsan.
Gareth BaleLuis Advíncula